घरमा साङ्ग्ला छन् भने बुझुनुहोस हजुरलाई यो रोग छिट्टै लाग्दैछ।बेवास्ता नगरी ध्यान दिएर पढ्नुस – Jagaran Nepal
घरमा साङ्ग्ला छन् भने बुझुनुहोस हजुरलाई यो रोग छिट्टै लाग्दैछ।बेवास्ता नगरी ध्यान दिएर पढ्नुस
Jagaran Nepal शनिबार, आश्विन ३०, २०७८
गर्मी सिजनमा खानेकुरा चाँडै सड्ने गर्छ । त्यसमथि झिँगा र साङ्लाले खानेकुरा दूषित बनाइदिन्छ । झिँगा त नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर साङ्ला फैलिएपछि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ।खासगरी भान्साको कुनाकाप्चामा बस्ने साङ्ला शौचायलको ढल जस्ता ठाउँमा पनि सुरक्षित हुने गर्छ । यसरी जहाँपनि सुरक्षित हुने र अत्याधिक प्रजनन क्षमता भएका कारण साङ्लालाई निर्मूल गर्न त्यति सजिलो छैन।
यो यस्तो जीवन हो, जो हजारौं, लाखौं वर्षदेखि धर्तीमा छन्। हरेकजसो घरमा साङ्ला पाइन्छ। घरको कुनाकाप्चामा साङ्ला नै साङ्ला भेटिन्छ । बेडरुम, भान्सा जताजतै साङ्ला हुन्छ । यस्ता साङ्लाले खानेकुरा दूषित बनाउँछ । त्यस्तो खानेकुरा सेवन गर्दा हामीलाई पेटको समस्या हुन्छ । वान्ता वा पखला लाग्न सक्छ ।साङ्लाको कारण फुड प्वाइजन हुने सम्भावना रहन्छ । यसका साथै टाइफाइडको पनि समस्या हुन सक्छ । किन यस्तो हुन्छ भने साङ्ला सैलमोनेला नामक भाइरस फैलाउने प्रमुख श्रोत हो ।
साङ्लाको कारण एलर्जीको समस्या हुन्छ । यसले छालामा समस्या ल्याउन सक्छ । खासमा साङ्लाले मुखबाट र्‍याल निकाल्छ । त्यस्तो र्‍याल भान्साको कुनैपनि सामानमा रहन सक्छ । भाँडाकुँडा, खानेकुरामा र्‍याल रहन्छ । साथै ओड्ने ओछ्याउनेमा पनि साङ्लाको र्‍याल रहन्छ, जसले एलर्जीको समस्या ल्याउँछ ।
साङ्लाको पेटको जीवाणु खानामा पर्छ । यसले पाचन क्रियामा समस्या उत्पन्न गर्छ । एक अध्ययनअनुसार जीवाणु सुडोमोनाज ऐरुगिनोसा साङ्लाको पेटमा हुन्छ । यो युरिन ट्रेक्ट इन्फेक्सन, पाचनसम्बन्धी समस्या र सेप्सिसको कारण बन्छ।साङ्ला दम रोगीका लागि त शत्रु नै हो । घरमा साङ्ला धेरै बढ्नु भनेको दम रोगीको लागि थप समस्या निम्त्याउनु हो ।
कसरी बच्ने ?-साङ्ला गर्मीमा एकदमै छिटो फैलन्छ । यसको सन्तान पैदा गर्ने क्षमता उच्च हुन्छ । सजिलै मार्न पनि सकिदैन । किनभने यसको टाउको छिनाइयो भने समेत केहि दिनसम्म जीवित रहन सक्छ । यो प्राय भान्साको कुनाकाप्चा, खाट, दराज आदिमा लुकेर बस्छ । यसरी लुकेर बस्ने साङ्ला भगाउन केहि घरेलु विधी पनि अपनाउन सकिन्छ ।
– साङ्लोबाट मुक्ति पाउने पहिलो उपाय भनेको घरको सरसफाई हो । सफा र उज्यालो स्थान यसको लागि अनुकूल हुँदैन ।
– लसुन, प्याज र मरिचलाई बराबर मिलाएर पिस्नुपर्छ । उक्त पेस्टलाई पानीमा मिसाएर घोल तयार गर्ने । अब त्यो घोललाई एउटा बोत्तलमा राखेर साङला बस्ने कुना काप्चामा छर्कनुपर्छ । केही समय नियमित घोल छर्केपछि साङ्लाको समस्याबाट राहत मिल्छ ।
– सख्खर र बेकिङ सोडालाई बराबर मात्रामा मिलाउने र साङ्लो बस्ने स्थानमा राख्नुपर्छ । त्यसको छेउमा थोरै पानी पनि राखिदिनुपर्छ । सोडा खाएपछि यसले पानी पिउनुछ र मर्छ । बेकिङ सोडा यसको पेटमा गएपछि हानी पुर्‍याउँछ ।
-पानीमा डिटर्जेन्ट घोलेर साबुनको घोल बनाउने । यसका लागि कुनैपनि किसिमको साबुन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस घोललाई स्प्रेको माध्यामबाट साङ्ला बस्ने ठाउँमा छर्कनुपर्छ ।
– तेजपत्ताको गन्धसंग कक्रोच भाग्ने गर्छ । त्यसैले केहि पत्ता कक्रोच धेरै बस्ने कुनामा राखीदिनुहोस् । यसको गन्धले कक्रोच आँफै भाग्ने गर्दछन । तर एउटा पत्ताले लामो समय काम नगर्ने भएकोले केहि हप्ताको अन्तरमा त्यसलाई बदल्नु पर्दछ।
-ल्वाङ्गको गन्ध ल्वाङ्ग पनि कक्रोच भगाउने उत्तम उपाय हो । कक्रोच धेरै लाग्ने ठाउँमा ल्वाङ्गका केहि टुक्रा अथवा धुलो राखिदिनुहोस । यस उपायबाट कक्रोच भाग्छ ।
– मट्टीतेलको प्रयोगले पनि कक्रोच भगाउन सकिन्छ । तर, यो प्रज्वलनशील पदार्थ भएकोले निकै सजगता अपनाउनु जरुरी छ।
पत्नीले जन्माएको बच्चा पतिले मेरो हैन भनेपछि विषय अदालत पुग्यो, अदालतको आदेशले दुनियाँ हैरान
मानिसको आयु बढाउने अनौठो आलु, जसको सेवनबाट मानिस दिर्घायु बन्ने
अब जौबाट नै मासु फालेपछि पशुवध गर्न नपर्ने !
श्रीमानको गलामा फित्ता बाँधेर श्रीमतीले घुमाइरहेकी थिइन् कारण थाहा पाउदा सबै छक्क !
संसारलाइ स्तब्ध बनाउने यस्तो घटना : २५ लाख युरो खर्च गरेपछि यी ब्याक्तिको क’र्तुत बल्ल पत्ता लाग्यो
जब बिहेमा निम्तो गरेका निम्तालु नआएपछी बेहुलीले जे गरिन त्यसले सबैको होस् उडायो !